Atileet Saamu’el Tafarraa: ‘Anuu Yoomiif ni injifata jedhee eegeen ture’ – Kichuu
HomeSportsAtileet Saamu’el Tafarraa: ‘Anuu Yoomiif ni injifata jedhee eegeen ture’
Atileet Saamu’el kilabii seenee waggaa sadiitti milkaa’uu danda’e
Atileet Saamu’el Tafarraan dheengadda gaafa Sanbataa fiigicha mana keessaa Barmingihaam’tti taasifame riikardii addunyaa waggaa 22 ture cabsuun irra aane.
(bbcafaanoromoo)—-Shaampiyoonaan fiigicha mana keessaa 1,500m Saamu’el riikardii atileetii Morokoo Hishaam El Garuuj 3:31:18 fiiguun bara 1997 galmeessise cabseera.
Atileetin fiigicha mana keessaa barana mo’ame hin beekneefi ni injifata jedhame eegame ture, Yoomiif Qajeelchaa immoo 3:31:58 galmeessuun yeroo saffisaa ofif galmesseera.
Adamsoon riikardii atileetii Morokoo cabsuuf Yoomiif taasisaa ture isaan ta’u baatus garuu milkaa’ina horateera.
Fayyisaa Leellisaan yoo isa ‘filatan biyyaaf fiiguu barbaada’
Atileetota Oromoo Biraaziil Riyootti dagataman
Amna murteessaa kubbaa miilaa Baamlaak Tasammaa Wayyeessaa
Yeroo Saamu’el itti xumure 3:31:04 yeroo tahu yeroo sakandii tokko gadiin foyyeesse jechuudha.
”Ani baay’ee natti tole. Nan gammade. Gammachuunkoo hammana jedhame ibsamuu hin danda’u,” jechuun BBC’tti dubbateera.
‘Cabsuuf hin karoorfanne’
Yoomiif riikardii atileetii Morookoo waggoota 20 olif turan gidduu kana adamsuuf jechuun isaa riikardiin haaraa akka galmaa’u gumaateera.
Yoomiif riikardii addunyaa cabsuuf karoorfate malee Saamu’el yaada kana hinqabu ture.
”Ani rikardii addunyaa nan cabsa jedhee karoorfadhee hin deemne. Dorgomuufu yaada hin qabu ture,” jechuun BBC’f himeera.
”Dhiibbaa akkamiitiin gara dorgommii kanatti seene malee yaada koo keessa wanti akkasi hin jiru gargaarsuma Waaqaati. ‘
[perfectpullquote align=”right” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”16″] Anu Yoomiif (ni mo’ata jedhee) eegeen ture
Saamu’el Tafarraa, Atileetii
Riikardiin atileetin kuni cabse umurii isaa oli. Atileetin umurii 19 osoo hin dhalatin dura riikardii addunyaa galmaa’e ture cabse ”mo’uu isaaf dolaara Ameerikaa 3000, riikardii cabsuu isaaf immoo dolaara 30,000 akka badhaafame,” BBC’tti himeera.
Saamu’el bara darbe waldorgommiidhuma amma itti riikardii cabse mo’ate achuma Barmingihaamitti shaampiyoonaa addunyaa ta’ee ture. Egaa waggaa booda riikardii addunyaa waggaa 22 ture cabsuu kan danda’e.
Riikardii waggaa 22 dura bara 1997 atileeti Morookoo Hishaam El Gaarujin Istutgaartitti galmaa’e cabse
Riikardii addunyaa yeroo jalqabaaf irra-aanuun isaa akkana irra-aanuun isaa milkaa’ina biraaf akka isa kakaasuufi atileetota ol adeemaaf fiigicha fagenya gabaabaan fageenya akka isa godhatan yaada qaba.
‘Anu Yoomiif eegeen ture’
Torban dura Yoomiif Niw Yoorkitti fageenya maayilii tokko kan riikardiin atileetii Morokoo Hishaam El Garuujin qabame ture dorgome mo’atus maayikiroo sakandii tokkoof jedhe riikardii addunyaa osoo hin cabsin hafeera.
Sababa kanaaf dorgommii kana dura xiyyeeffannoon guddaa atileet Yoomiif Qajeelchaarra ture. Saamu’elis kanuma yaadaa ture.
”Anis eegeen ture isa. Garuu, Yoomiifis morkataa cimaa akkan ta’u of amansiise kaniin seene,” jedha Saamu’el.
Dorgommiin torban darbe kan Yoomiif itti milkaa’u dhabe garuu hiriyyaa isaa Saamu’elis gaddisiseera.
Daraartuu Tulluu :”Yeroo sana namni ni mo’atti jedhee na eege hinturre”
Aangoo gad-lakkisuu atileet Hayilee duuba
Qananiisaan Kipchoogee fi qopheessitoota maaraatoonii Landan qeeqe
”Anattiyyuu baay’ee natti dhagahame ture. Yoomiif maayikiroo sakandii tokkoof jalaa hafun isaa baay’ee na gaddisiise.
Rikardiin haaraa cabuu danda’aa?
Atileet Yoomiif Qajeelchaa ammallee riikardiin kuni fiigicha mana keessaa kan 1,500m fooyya’u danda’a yaada jedhu qaba.
Abbaan riikardii addunyaa galmeessise saamu’elis yaada kanaan walii gala.
”Morkataan cimaa yoo jiraate, xiiqiidhaan mo’uf kan deemu yoo jiraate, kan nama fiigsisu (pacemaker) seeraa yoo jiraate hin caba,” jechuun himeera.
Riikardii dura garuu Saamu’el Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa baatii Waxabajjii Dohaa taasifamu irratti biyyaaf qabxii galmeessisuuf yaada qaba.
Atileet Guyyee Adoolaan eenyu?
Maqaan Saamu’el Tafarraa Namee dha
Godina Shawaa Lixaa Aanaa Midaa Qanyii Ganda Daamoo Waange dhalate
Bara 2007 barnoota kutaa 10 adda kutuun fiigicha eegale
Waggaa tokko olif shaakala fiigichaa hojjeteera
Bara 2008 kilaba Dhaabbata Bosonaafi Bineensa Bosonaa Oromiyaa seene
Bara 2009’tti shaampiyoonaa addunyaa hirmaatus marsaa itti aanutti darbuu dhabe
Bara 2010 Shaampiyoonaa fiigicha mana keessaa addunyaa irratti 1,500’n warqii argate